जेठाजुले बन्चरो हा’नेर बुहारीलाई दुइ टु’क्रा पारे, श्रीमान दुखी हुँदै…(भिडियो हेर्नुहोस)
September 5, 2020 1383
बुहारीलाई ब’ञ्चरो प्र’हार गरी ह’त्या गर्ने जेठाजु’लाई काभ्रे प्रह’रीले प’क्राउ गरेको छ । काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–८ दाप्चाबजार नजिकै घरमा रहेकी बुहारी’लाई ध’रिलो ह’तियार ब’न्चरो प्र’हार गर्ने जेठाजु प’क्राउ परेका हुन् ।
विहिबार विहान घरायसी वि’षयमा वि’वाद हुँदा ब’न्चरो प्र”हार गरिएको हुन सक्ने प्रहरी’ले जानकारी दिएको छ । श्याम’पाटी प्रह’री चौकीबाट गएको प्र’हरी टोलीले ब’ञ्चरो प्र’हार गर्ने जे’ठाजु सुर्दशन अधिकारीलाई नि’यन्त्रणमा लिएको छ ।
३५ बर्षीया रञ्जना अधिकारी डराउने पोखरी स्वा’स्थ्य चौकीमा केहि वर्ष देखि कार्यालय सहयोगिका रुपमा का’र्यरत थिईन् । एक स’न्तानकी आ’मा रञ्जना र उनका श्री’मान बीच केहि समय अघि सामान्य ख’टपट भए पनि पछि सँगै बस्दै आएका थिए ।
भारतमा बस्दै आएका जेठाजु सुर्दशन कोरोना भाईरस नि”यन्त्रण गर्न लक’डाउन गर्नु अघि घर फर्किए’का थिए ।
Prevभोलि भदौ २१ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextआज भदौ २१ गते आईतबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
प्रियंका र आयुष्मानमा कसले कमाउँछ धेरै? बिहे लगत्तै यति महंगो घर किने (भिडियोसहित)
आज डलर सहित विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नु`होस्
दिलीप,वर्षा र पूजाले यस्तो रमाइलो गर्दै मनाए होली [भिडियो हेर्नुहोस]
शिशिर भण्डारीको ‘अन्तिम भाईटिका’ ! सबै नेपालीलाई रुवाउने… (भिडियो सहित)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (114965)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (92688)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (91494)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (85764)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81120)